Akanjo miaro azo alaina any Shina, fanamboarana ary orinasa tsy misy fatra | Jingzhao
Modely: hood iray tsy misy fonony kiraro
Famaritana: s, m, l, XL, XXL, XXXL
Izy io dia ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana amin'ny andrim-pitsaboana hisorohana ny fifindran'ny virus amin'ny marary mankany amin'ny mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ny rivotra na ranoka.
Fampisehoana vokatra sy firafitry ny firafitra:
Ity vokatra ity dia mazàna amin'ny tampon'akanjo ambony, pataloha, fehikibo vita amin'ny kofehy ary sary famantarana vozon'akanjo miverina. Izy io dia vita amin'ny lamba fibre polyethylene avo lenta, izay vita amin'ny firafitra iray vita amin'ny Hooded ary nasiana tombo-kase.
1. Azafady mifidy ary hamafiso ny maodely fiarovana alohan'ny hampiasana azy.
2. Ny akanjo miaro sahaza ny habenyo dia tokony safidiana arakaraka ny endrikao.
3. Ataovy ny akanjo fiarovana mba hahazoana antoka fa mihidy tsara ny mpiambina fidirana. Azafady manapa-kevitra raha hiakanjo
fitaovana fiarovana hafa arak'izay takiana. Raha asiana tombo-kase amin'ny kasety ny tarehy, ny tanana na ny tongotra / ny tongony ary ny fisokafana hafa, dia ho tsara kokoa ny fiatraikany fiarovana.
Fitandremana, fampitandremana ary atiny misy sosokevitra:
1. Azafady mba vakio tsara ilay boky torolalana alohan'ny hampiasana azy.
2. Alohan'ny hampiasana dia azafady araho tsara ny fampiasana ary ampiasao ny fameperana ny akanjo fiarovan-tena ara-pahasalamana amin'ny volo vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy polyethylene. Ny mpampiasa dia tokony hitsara raha mety amin'ny fotoana manokana ny vokatra. Raha mihoatra ny fampiasana sy fampiasana ny famerana ny vokatra ny fotoana fampiasana dia tsy manome antoka an'izany izahay ary tsy handray andraikitra mifandraika amin'izany.
3. Azavao ny tara-pahazavana mivantana.
4. Ity vokatra ity dia atsonika amin'ny 135 ℃, azafady mba alaviro ny loharano hafanana sy ny afo misokatra rehefa mampiasa.
5. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina. Azafady mba tantano izany araka ny fepetra takian'ny lalàna mifehy ny fisorohana biolojety aorian'ny fampiasana azy.
6. Voarara ho an'ireo tsy mahazaka lamba polyethylene.
7. Ity vokatra ity dia fonosana voadio. Raha simba ny fonosana dia aza ampiasaina. Alohan'ny anaovana dia mba jereo tsara ny akanjo miaro. Raha misy ny fahasimbana, ny fiovan'ny volon-koditra, ny fandotoana ary ny toe-javatra hafa, azafady aza apetraka izany.
8. Ny vokatra dia tsy azo ampiasaina mihoatra ny vanim-potoana manan-kery.
Daty mahomby: ampiasaina amin'ny vanim-potoana vonjy maika
Daty famokarana / andiany No.: jereo marika
Fepetra fitahirizana sy fitaterana: azafady azafady ny tara-masoandro mivantana ary mitahiry amin'ny mari-pana ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina.
Fanazavana ny marika, famantarana, marika, fanafohezana, sns
Anaran'ny registrant / mpanamboatra: Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd.
Adress: No.318, Gong Ye 1LU (South), faritra fampandrosoana ny toekarena Xiaolan, Nanchang, JiangXi, Sina.
Teo aloha: Akanjo fitokana-monina azo ariana
Manaraka: Akanjo fandidiana tsy tenona azo alefa